Union Minister U Kyaw Tin attends Second High-Level United Nations Conference on South-South Cooperation – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
On 22 March 2019, the Union Minister attended the working dinner hosted by Mr. Rodolfo Caffaro Kramer, President of ASEAN-MERCOSUR Chamber of Commerce and exchanged views on opportunities of promoting trade, tourism and investment between Myanmar and Argentina. Ambassador of Myanmar concurrently accredited to Argentina, U Myo Tint, officials concerned from the Ministry of Foreign Affairs also accompanied the Minister at the meetings.
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗျူနိုအေးရိစ်မြို့တွင် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ယင်းညီလာခံသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ၌ ချမှတ်ခဲ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအကြား နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး ဗျူနိုအေးရိစ် လုပ်ငန်းစဉ်၏ နှစ် (၄၀) ပြည့်မြောက်သည့် အခါသမယတွင် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။
ညီလာခံသို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း (၁၆ဝ) မှ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ/ အစိုးရအကြီးအကဲနှင့် ဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး “စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ၂၀၃၀ အာဂျင်ဒါ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အခန်းကဏ္ဍ” နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ညီလာခံတွင် တက်ရောက်လာကြ သည့် ကိုယ်စားလှယ်များက စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေနှင့် ရှေ့အလားအလာများအပေါ် ပြန်လည် သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ညီလာခံ၌ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့ အနေဖြင့် အဆိုပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအား မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကူညီပံ့ပိုးရေး၊ အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေး၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ညီလာခံ၏ အထွေထွေ မူဝါဒရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ မိန့်ခွန်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွင်း စီးပွားရေး ပိုမို တိုးတက်လျက်ရှိသော နိုင်ငံများ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာသော အလားအလာနှင့် အခွင့်အလမ်းများ ရှိလာကြောင်း အလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ၂၀၃၀ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ပြည့်မှီစေရေး အတွက် စိန်ခေါ်မှုများအား ဖြေရှင်းရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အရေးပါမှု အခန်းကဏ္ဍ ကို ထောက်ခံပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများအား လုံလောက်သော ပြည်ပအကူအညီပေးအပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အညီ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံအားလုံး၏ ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် ခွဲတမ်းသတ်မှတ်မှု ကင်းလွတ်ခွင့်များကို ဆက်လက်ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုမှုများအပေါ် ထောက်ခံကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ၂၀၃၀ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များကို အောင်မြင်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း၊ ယင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) အား ချမှတ်ကာ အမျိုးသားအဆင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် ယင်းစီမံကိန်းသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းမှု၊ သဟဇာတဖြစ်မှု၊ သာယာဝပြောမှုတို့ဖြင့် နေထိုင်နိုင်မည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေး မျှော်မှန်းချက်ဖြင့် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖော်ရန် စိစစ်ပြီးဖြစ်သည့် အဓိကစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်သော Project Bank တည်ထောင်ခြင်း အပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း တည်ထောင်ရေးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်နေမှု များအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ အားလုံးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြုကြရန် ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ညီလာခံ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံ၏ ရလဒ်စာတမ်းကို အတည်ပြု ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ ဗျူနိုအေးရိစ် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အခြား ဒေသခွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ယန္တရားများအတွင်းမှ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ဆက်လက်၍ နီးကပ်စွာ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားကြရန် ထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်၊ ညနေပိုင်းတွင် အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Jorge Faurie မှ တည့်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်တွင် အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Jorge Faurie နှင့် အာရှနိုင်ငံများမှ ဝန်ကြီးများအကြား ကျင်းပသည့် အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနားနှင့် အာရှနိုင်ငံများအကြား ဘက်ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စနှင့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍတို့၌ နှစ်နိုင်ငံအဆင့်နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်အဆင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ညီလာခံကာလအတွင်း မတ်လ ၂၁ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Gustavo Zlauvinen နှင့်လည်း သီးခြားတွေ့ဆုံ၍ မြန်မာ-အာဂျင်တီးနား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဇီဝနည်းပညာ၊ ဆေးဝါး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား စသည့်ကဏ္ဍ များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ASEAN-MERCOSUR ကုန်သည်ကြီးများအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Rodolfo Caffaro Kramel မှ တည့်ခင်းဧည့်ခံသော အလုပ်သဘော ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက် အခွင့်အလမ်းများ အပေါ် အမြင်ခြင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
ညီလာခံသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးတင့်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။